Dowladda oo ka Jawaabtay soo jeedintii Puntland iyo Jubbaland ee Shirka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda oo ka Jawaabtay soo jeedintii Puntland iyo Jubbaland ee Shirka
Ardaan Yare 11 February 2021
Wasiirka warfaafinta Somalia ayaa mar kale ku celiyay in la isugu yimaado Magaalada Garoowe, iyadoo la tixraacayo Shirka uu Madaxwayne Farmaajo iclaamiyay inuu halkaas ka dhacayo 15-ka Bishan.
Waxaa uu intaas ku daray in ujeedada shirka ay tahay sidii loo ambaqaadi lahaa, loona dhameystiri lahaa heshiiska 17-kii Septembar ay Magaalada Muqdisho ku saxiixeen madaxda DF iyo dowladaha xubnaha ka ah.
“Waxaa soo baxaya hadalo aanan fileynin oo ah in la bedelo goobtii uu Madaxweynuhu ku baaqay in shirka ee magaalada Garowe oo runtii ah magaalo Nabadeed oo ku caan baxday marti soorka” ayuu yiri Dubbe oo la hadlaayay telefashinka BBC Somalia.
Waxaa uu u xusay in madaxda DF ay mar walba diyaar u ahaayeen in dalku ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay, isagoo taas daliil uga dhigay tanaasulaadka faraha badan ee madaxda Dowladda sameeyeen.
Dhinaca kale, Wasiir Dubbe ayaa soo dhoweeyey baaqii Golaha amaanka ee QM ee ahaa in la qabto shirar kale oo lagu xaliyo khilaafka doorashada, isagoo madaxda dowlad goboleedyada ugu baaqay ineysan ka caga jiidin shirarka lagu xalinayo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dalka.
Musharaxiinta Madaxweynaha oo Caawa ku baaqay Shir Deg deg ah oo Farmaajo…
Duqeyn diyaaradeed oo lala beegsaday xubno ka tirsan Al-shabaab iyo xog laga helay